एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीले यस वर्ष सम्पत्तिमा १८ खर्ब रुपैयाँ थपे – " कञ्चनजंगा News "
एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीले यस वर्ष सम्पत्तिमा १८ खर्ब रुपैयाँ थपे
No Comments on एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीले यस वर्ष सम्पत्तिमा १८ खर्ब रुपैयाँ थपे
रिलायन्स इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी (६२) को सम्पत्तिमा जनवरी १ देखि डिसेम्बर २३ सम्म १६.५ अर्ब डलर ( करिब १८ खर्ब रुपैयाँ) को वृद्धि भएको छ । एशियाका धनी व्यक्तिमध्ये अम्बानीको सम्पत्तिमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको हो । रिलायन्स इन्टष्ट्रिजको शेयमा यस वर्ष ४० प्रतिशत वृद्धि भएपछि उनलाई फाइदा भएको हो । अम्बानीसँग रिलायन्सको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ ।
ब्लूमबर्ग बिलेनियर इन्डेक्सका अनुसार अम्बानीको अहिलेको सम्पत्ति ६०.८ बिलियन डलर (करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ) छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो इ–कमर्स कम्पनी अलबाबाका संस्थापक अध्यक्ष ज्याक माको सम्पत्तिमा यो वर्ष ११.३ बिलियन डलरको वृद्धि भएको छ । यससँगै उनको सम्पत्ति ४७ बिलियन डलर पुगेको छ ।
धनी परिवारको सम्पत्ति प्रत्येक घण्टा ४० लाख डलरले बढ्दैछ !
एजेन्सी । पृथ्वीका सबैभन्दा धनी परिवारले प्रत्येक मिनेट ७० हजार डलर, घण्टाको ४० लाख डलर र हरेक दिन १० करोड डलरले झन झन आफ्नो सम्पत्ति बढाइरहेका छन् ।
उनीहरुले नै विश्वमा कूल १४ खर्ब बराबर सम्पति सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
यसरी विश्वका २५ सबैभन्दा धनी परिवारहरुसँग अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५० अर्ब बढी सम्पति जम्मा भइसकेको छ ।
यहि गतिमा अघि बढ्ने हो भने उनीहरुको सम्पत्ति हामीले समाचार पढ्न सुरु गर्दागर्दै २३ हजार डलरले बढिसकेको छ ।
यसरी अहिलेको पिँढी अत्यधिक सम्पत्ति र क्रुर आर्थिक असमानताको बीचमा संघर्षरत् रहेको यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । स्निकर्स, मार्स, मिल्कीवे, ट्विीग्स, एम एण्ड एमलगायत सबैभन्दा प्रख्यात चकलेट निर्माता मार्स परिवारले यसवर्ष मात्र आफ्नो ३७ अर्ब डलरको समपतिलाई १२७ अर्ब पुर्याएको छ ।
त्यस्तै साउदीको शाही परिवार पनि हाल १०० अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिको मालिक रहेको छ । यता भारतका अम्बानी परिवारले पनि आफ्नो सम्पति ७ अर्ब डलरबाट ५० अर्ब डलर पुर्याइसकेका छन् ।
यसरी शीर्ष २५ धनी व्यवसायी परिवारको सूचीमा सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा टिकट्याक मिन्ट र न्युटेला ब्रान्डका मालिक फेरो परिवारले रहेका छन् भने हाल वालमार्ट विश्वकै सबेभन्दा बढी आम्दानी गर्ने रिटेलर कम्पनी बनेको छ ।
यसको विश्वव्यापी ११ हजार भन्दा धेरै स्टोर छन् र ५१४ अर्ब डलर बराबर व्यापार हुने गर्दछ । पृथ्वीमा अमेरिकाका मात्र ०.१ प्रतिशत धनीहरुले १९२९ मा विश्वको कूल सम्पति भन्दा बढी पैसा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर बिस्तारै एसिया र युरोप पनि यस दौडमा धेरै अगाडि आइसकेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा २५ सबैभन्दा धनी परिवारहरुले अघिल्लो वर्षको भन्दा २४ प्रतिशत बढी सम्पत्ति कमाएका हुन् ।
यसले धनी र गरिबबीचको अन्तर असयम्भव रुपमा बढाइदिएकाप्रति अधिक चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
← अतुलनिय योगदान गरेका कुलमान घिसिङ र डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिने → भगवान शिवका पिता को हुन ? निकै कौतुहलता जगाउने यो प्रश्न जस्तै उत्तर पनि छ त्यतिनै रोचक